Kuthinta impilo yengane yakho - Impilo Yomlomo Yezingane
I-sali iyinkampani ethwala amagciwane, futhi manje kunezifundo eziningi. Ngesikhathi sokwelashwa, noma ngabe kusekho ukungakhululeki, la ma-caries amazinyo nawo angumbhede oshisayo ohlanganiswe neRirol, lawa magciwane akhethekile ngeke agwemeke empilweni yawo yansuku zonke, futhi "azosabalala" ku-b ...
I-Sino-Dental® 2021 Exhibitor Manual & Exhibiton Amafomu
ISENDLALELO Njengombukiso wamazinyo omkhulu futhi onethonya elikhulu eChina, iSino-Dental® isiphenduke umbukiso wamazinyo wokulinganisa, ojabulela idumela eliphezulu eChina nase-Asia ezungezile. Kuze kube ngu-2019, ibibanjwe ngempumelelo iminyaka engama-24. Kule minyaka engamashumi amabili edlule, uSino-Dental ulwele uku ...
Isingeniso Imishini elungisiwe yokususwa kwamazinyo abekwe kabi isetshenziswa kuma-orthodontics kubo bobabili abantu abadala nasebekhulile. Ngisho nanamuhla, inhlanzeko yomlomo enzima kanye nokuqoqwa okwandayo kokuqongelela kwamacwecwe nokudla ngesikhathi sokulashwa ngezinto zokwenza izinto eziningi (MBA) kumele isikhangiso ...
Ngabe izinzwa zomlomo zangaphakathi ziyafana kuwo wonke umtholampilo? Kuze kube manje, besicabanga ukuthi inzwa yomlomo yangaphakathi iyithuluzi lamazinyo eliyisisekelo kakhulu elisivumela ukuthi sibheke izilonda zeziguli eduze. Kodwa-ke, njengoba inani nokuncintisana kodokotela bamazinyo kuqhubeka nokukhula, thina ...